February 2017 - Page 4 of 31 - Sawirrotv
Monthly Archive for: 'February, 2017'
Muuqaalkii Leyla Cumar Baaruud (VIDEO)
Islaantani ayaa la sheegayaa inay u dhaxdo Sarkaal Ajaaniibta Ururka Al Shabaab ka tirsan, oo dhalashadiisa lagu sheegay Itoobiyaan, waxaana gacanta lagu soo dhigay, xilli ay damacsaneyd inay safar ugu amba baxdo Degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe. Haweenaydani ayaa sheegtay inay iyadu isku qarxin lahayd hadii ay haysan lahayd jaakadaha la’isku qarxiyo, waxayna xitaa …
Madaxweyne Farmaajo oo ka War Bixiyay Safarkii uu ku Tegay Dalka Sacuudi Caraabiya (VIDEO)
February 26, 2017 – Madaxweynaha Soomaaliya Mudane, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay in dhammaan codsiyadii ay u bandhigeen dowladda Sucuudiga laga aqbalay, isaga oo intaas raaciyay in Ra’iisul Wasaaraha magacaaban, looga fadhiyo marka la ansixiyo ka dib, inuu dhiso guddiyadii dhaqan-gelin lahaa qodobada la isla meel dhigay. Qorshayaashii ay dowladda …
Farmaajo oo Dalka Dib Ugu soo Laabtay (VIDEO)
Qorshayaashii ay dowladda Soomaaliya hordhigtay Boqortooyada Sucuudiga waxaa kamid ahaa in la kabo miisaaniyadda dalka si loo bixiyo mushaaraadka ciidammada iyo shaqaalaha hey’adaha dowladda, dhismaha xarumo cusub oo ay hay’adaha Qaranku ku shaqeeyaan, garoon diyaaradeed oo cusub, dib u dhiska waddooyinka laamiyada ah ee isku xira magaalooyinka dalka iyo dib u hawlgelinta safaaraddii Boqortooyada Sucuudi …
Ciidamada Sirdoonka Soomaaliya oo Gacanta ku soo Dhigay Haweeney uu Qabo Sarkaal Al Shabaab ka Tirsan (SAWIRRO)
February 25, 2017 – Ciidamada nabad sugida iyo Sirdoonka Soomaaliya ayaa soo qabtay xaaska mid kamid ah saraakiisha Ajaaniibta ee ka dhinac dagaalama ururka Al-shabaab Haweeneydan oo magaceeda lagu sheegay Leyla Cumar Baaruud ayaa ah xaaska sarkaal Ajnabi ah oo dhalashadiisu tahay Itoobiyaan kaas oo ka tirsan xoogaga Al-shabaab ee ka soo horjeeda dowlada Soomaaaliya. …
Arin layaablah oo Markii u Horeysay ka Dhacday Aqalka Cad ee Maraykanka (VIDEO)
February 25, 2017 – Xukuumada Madaxweyne Donald Trump ayaa bilaawday cadaadis ka dhan ah qaar kamid ah Warbaahinta ugu caansan ee dalka Mareykanka, waxaana arintan walaac xoogan ka muujiyay aadna u cambaareeyay Ururada Saxaafada iyo taleefishinadii la casuumay. Qaar kamid ah Warbaahinta ugu waa weyn ee dalka Mareykanka iyo kuwa caalamka qaarkood ayaa shalay loo diiday …
Warbahin Laga Mamnuucay Aqalka Cad (VIDEO)
Qaar kamid ah Warbaahinta ugu waa weyn ee dalka Mareykanka iyo kuwa caalamka qaarkood ayaa shalay loo diiday in ay ka qeytb galaan soona tabiyaan shir saxaafadeed maalintii shalay ee Jimcaha ahayd ka dhacday Aqalka cad ee Maraykanka. VIDEO – 1 VIDEO – 2 Warbaahinada shalay loo diiday in ay galaan Aqalka cad ayaa waxaa …
Dagaalbeeleed Markale Maanta ka Qarxay Magaalada Marka
February 25, 2017 – Wararka inaga soo gaarayo magaalada Marka ayaa sheegaya in saakay subixii qeybo kamid ah magaaladaasi uu ka dhacay dagaal u dhaxeeyay labo maleeshiyo beeleed oo halkaasi marar badan oo hore ugu dagaalamay. Dagaalka ayaa la sheegay in uu socday saacado kooban, labada dhinac ee dagaalamayay ayaa isku adeegsanayay hubka nuucyadiisa kala …
Dilkii Soomaaliga Magaalada Pittsburgh (VIDEO)
Ragga dilka geystay ayuu boolisku sheegay inay ahaayeen afar dhalinyaro ah, oo sheegay in ay doonayeen inay dhacaan Ramadaan oo taksiile ahaa. Dilkan loo geystay muwaadinka Soomaaliyeed ayaa waxaa ay cabsi ku abuurtay dadka Soomaalida ah ee Taksiyada ku wada dalka Mareykanka.
Soomaali Taksiile ah oo Xalayn Lagu Dilay Magaalada Pittsburgh ee Dalka Maraykanka (VIDEO)
February 25, 2017 – Allaha u naxariistee, nin taxiile ahaa oo lagu magacaabo Ramadaan Maxamed ayaa xalay lagu dilay Magaalada Pittsburgh Gobolka Pennsylvania ee dalka Maraykanka. Ragga dilka geystay ayuu boolisku sheegay inay ahaayeen afar dhalinyaro ah, oo sheegay in ay doonayeen inay dhacaan Ramadaan oo taksiile ahaa. Ragga boolisku uu xiray ayaa lagu kala …
February 25, 2017 – Maxkamadda Caalamiga ah ee ICJ,ayaa waqti gaaraya 10 bilood u qabatay dowladda Kenya in ay kaga jawaabto dacwadda dhanka Badda ah ee ay Somaliya ka soo gudbisay. Maxkamadda ayaa amartay in Kenya ugu dambeyn 18-ka December 2017-ka ay kaga soo jawaabto dacwadda ay Soomaaliya sanadkii 2014-kii u gudbisay Maxkamadda ICJ taas …